ငါနဲ့လည်းဘာမှမတော်ဘူး၊ မင်းတို့ညီအကို အိမ်လာစရာလည်း မလိုဘူးလို့ ပြောခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သားညီ – Myanmar Update News
“ငါ့ကို တော်တော် အရှက် ခွဲတယ်၊ မင်းတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ငါနဲ့လည်းဘာမှမတော်ဘူး၊ ငါ့ အိမ်လာစရာလည်း မလိုဘူး “ လို့ကျော်ဟိန်း ပြောတာ ခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သားညီ သရုပ်ဆောင်
ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သားညီကတော့ ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒွေး ရဲ့ ညီအရင်းဖြစ်သလို ကွယ်လွန်သူ ဦးကျော်ဟိန်း ရဲ့ တူတော်စပ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ လက်ရှိအချိန်အထိ အနုပညာလောကထဲ ရပ်တည်နေနိုင်တာဟာ အကိုဖြစ်သူ နဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူတို့ ကြောင့်လို့လည်း သားညီကဆိုပါတယ်။
“ ဦးကျော်ဟိန်းက အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တူတွေ၊ သားတွေ မရှိဘူး။ အရမ်းလည်း စည်းကမ်းကြီးတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့လည်း မတည့်ဘူး ဘာကြောင့်လဲဆို ကိုယ်က ဘုကလန့်လေ။ အမှတ်တရလေးတစ်ခုရှိတယ် သူက နင်တဲ့ ငါ့ကိုကျေးဇူးမတင်ဘူးလားတဲ့၊ ငါက မင်းကို ဒီလောကထဲ ခေါ်လာတာလေ
ဆိုတော့ သားရိုက်ချင်တယ်လို့ ပြောတာမှ မဟုတ်တာ ဦးကျော်ဘာသာ ဦးကျော် ခေါ်တာဆိုပြီး ပြန်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်တာတော့ အရမ်းချစ်ပါတယ်။အစ်ကို့ကြောင့်၊ ဦးကျော်ကြောင့် ဒီလောကထဲမှာ အခုချိန်ထိ ရပ်တည်နေနိုင်တာပါ” လို့ သူကဆိုပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေ စလုပ်ချိန်က ဒုတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ
ဦးကျော်ဟိန်းနဲ့ အတူတွဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ငိုရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို သရုပ်မဆောင် တတ်တဲ့ သူ့အတွက် ဦးကျော်ဟိန်းက ငိုတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့ပုံကိုလည်း အခုလို ပြောပြလာခဲ့တာပါ။ “ ကျွန်တော် နဲ့ ဦးကျော်ရဲ့ အမှတ်တရ ဇာတ်ကားက သန်လျင်မှာရိုက်တုန်းကပေါ့။ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ဘာလဲ ဆိုတော့
ဦးကျော်ဟိန်းကို ကလဲ့စားချေဖို့ဆိုပြီးတော့ အဖေနဲ့ အစ်မရဲ့ မြေပုံမှာ သစ္စာသွားဆိုတာ။ငိုတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းရိုက်တာပေါ့ အဲဒီမှာကိုယ်က ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားဆိုတော့ ငိုလည်းမငို မျက်ရည်လည်း မကျတတ်ဆိုတော့ ဦးကျော်ဟိန်းက ကျွန်တော့်ကို မင်းတော်တော် ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲတဲ့။ ငါ့ကို တော်တော် အရှက်ခွဲတယ်
မင်းတို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ငါနဲ့လည်း ဘာမှ မတော်ဘူး၊ ငါ့ အိမ်လာစရာလည်း မလိုဘူး၊ ငါ့ကို အရှက်ခွဲရက်တယ် ဆိုပြီးတော့ သူ စီးတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ ကျွန်တော့် ပါးကိုရိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်း ရှိုက်ကြီးတငင်ငို၊ အဲဒီလူကြီးကိုသတ်မယ် ဆိုပြီးတော့ သချိုင်းမြေကိုလည်း လက်သီးတွေနဲ့ထိုး လက်တွေလည်း ပေါက်ပြဲနေတာပဲ။
သူလိုချင်တဲ့ Mood လည်း ရလည်းရရော ကဒ် ဆိုပြီးဖြစ်ရော။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့် ပုခုံးကို လာဖက်ပြီး မင်းတော်သားပဲ ဘာညာနဲ့ပေါ့ ခုနက စိတ်ဆိုးထားတာက စိတ်ပဲ ဆက်ဆိုးရမလိုလို၊ဂုဏ်ပဲ ယူနေရမလိုလို” ဆိုပြီးတော့ သဘောကျရယ်မောရင်း ပြောပြလာပါတယ်။ကိုသားညီကတော့ သူနဲ့ ဦးကျော်ဟိန်း အကိုဖြစ်သူဒွေးတို့နဲ့
အမှတ်တရတွေကို ပြန်ပြောင်းပြောပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ သားညီဟာ ဒါရိုက်တာအလုပ်ကိုဇောက်ချလုပ်ကိုင်ပြီး အကိုဖြစ်သူနဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…. source – Shwe Yaung Myanmar
“ငါ့ကို တျောတျော အရှကျ ခှဲတယျ၊ မငျးတို့ ညီအဈကို နှဈယောကျ ငါနဲ့လညျးဘာမှမတျောဘူး၊ ငါ့ အိမျလာစရာလညျး မလိုဘူး “ လို့ကြျောဟိနျး ပွောတာ ခံခဲ့ရဘူးတဲ့ သားညီ သရုပျဆောငျ
ဒါရိုကျတာ တဈဦးဖွဈတဲ့ သားညီကတော့ ကှယျလှနျသှားရှာပွီဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျ ဒှေး ရဲ့ ညီအရငျးဖွဈသလို ကှယျလှနျသူ ဦးကြျောဟိနျး ရဲ့ တူတျောစပျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။သူ့အနနေဲ့ လကျရှိအခြိနျအထိ အနုပညာလောကထဲ ရပျတညျနနေိုငျတာဟာ အကိုဖွဈသူ နဲ့ ဦးလေးဖွဈသူတို့ ကွောငျ့လို့လညျး သားညီကဆိုပါတယျ။
“ ဦးကြျောဟိနျးက အနုပညာနဲ့ ပတျသကျလာရငျ တူတှေ၊ သားတှေ မရှိဘူး။ အရမျးလညျး စညျးကမျးကွီးတယျ။ ကြှနျတျောနဲ့လညျး မတညျ့ဘူး ဘာကွောငျ့လဲဆို ကိုယျက ဘုကလနျ့လေ။ အမှတျတရလေးတဈခုရှိတယျ သူက နငျတဲ့ ငါ့ကိုကြေးဇူးမတငျဘူးလားတဲ့၊ ငါက မငျးကို ဒီလောကထဲ ချေါလာတာလေ
ဆိုတော့ သားရိုကျခငျြတယျလို့ ပွောတာမှ မဟုတျတာ ဦးကြျောဘာသာ ဦးကြျော ချေါတာဆိုပွီး ပွနျပွောခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခဈြတာတော့ အရမျးခဈြပါတယျ။အဈကို့ကွောငျ့၊ ဦးကြျောကွောငျ့ ဒီလောကထဲမှာ အခုခြိနျထိ ရပျတညျနနေိုငျတာပါ” လို့ သူကဆိုပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတှေ စလုပျခြိနျက ဒုတိယမွောကျ ရုပျရှငျဇာတျကားမှာ
ဦးကြျောဟိနျးနဲ့ အတူတှဲ သရုပျဆောငျခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ငိုရတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးကို သရုပျမဆောငျ တတျတဲ့ သူ့အတှကျ ဦးကြျောဟိနျးက ငိုတတျအောငျ သငျပေးခဲ့ပုံကိုလညျး အခုလို ပွောပွလာခဲ့တာပါ။ “ ကြှနျတျော နဲ့ ဦးကြျောရဲ့ အမှတျတရ ဇာတျကားက သနျလငျြမှာရိုကျတုနျးကပေါ့။ ဇာတျဝငျခနျးက ဘာလဲ ဆိုတော့
ဦးကြျောဟိနျးကို ကလဲ့စားခဖြေို့ဆိုပွီးတော့ အဖနေဲ့ အဈမရဲ့ မွပေုံမှာ သစ်စာသှားဆိုတာ။ငိုတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးရိုကျတာပေါ့ အဲဒီမှာကိုယျက ဒုတိယမွောကျ ဇာတျကားဆိုတော့ ငိုလညျးမငို မကျြရညျလညျး မကတြတျဆိုတော့ ဦးကြျောဟိနျးက ကြှနျတေျာ့ကို မငျးတျောတျော ရှကျဖို့ကောငျးတာပဲတဲ့။ ငါ့ကို တျောတျော အရှကျခှဲတယျ
မငျးတို့ ညီအဈကို နှဈယောကျ ငါနဲ့လညျး ဘာမှ မတျောဘူး၊ ငါ့ အိမျလာစရာလညျး မလိုဘူး၊ ငါ့ကို အရှကျခှဲရကျတယျ ဆိုပွီးတော့ သူ စီးတဲ့ ဖိနပျနဲ့ ကြှနျတေျာ့ ပါးကိုရိုကျတယျ။ကြှနျတျောလညျး ရှိုကျကွီးတငငျငို၊ အဲဒီလူကွီးကိုသတျမယျ ဆိုပွီးတော့ သခြိုငျးမွကေိုလညျး လကျသီးတှနေဲ့ထိုး လကျတှလေညျး ပေါကျပွဲနတောပဲ။
သူလိုခငျြတဲ့ Mood လညျး ရလညျးရရော ကဒျ ဆိုပွီးဖွဈရော။ အဲဒီမှာ ကြှနျတေျာ့ ပုခုံးကို လာဖကျပွီး မငျးတျောသားပဲ ဘာညာနဲ့ပေါ့ ခုနက စိတျဆိုးထားတာက စိတျပဲ ဆကျဆိုးရမလိုလို၊ဂုဏျပဲ ယူနရေမလိုလို” ဆိုပွီးတော့ သဘောကရြယျမောရငျး ပွောပွလာပါတယျ။ကိုသားညီကတော့ သူနဲ့ ဦးကြျောဟိနျး အကိုဖွဈသူဒှေးတို့
အမှတျတရတှကေို ပွနျပွောငျးပွောပွထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ယခုအခြိနျမှာတော့ သားညီဟာ ဒါရိုကျတာအလုပျကိုဇောကျခလြုပျကိုငျပွီး အကိုဖွဈသူနဲ့ ဦးလေးဖွဈသူရဲ့ ခွရောကို နငျးနိုငျအောငျ ကွိုးစားနတေယျလို့ သိရပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…. source – Shwe Yaung Myanmar